QHUBEKA NOKUGQIBELA: INKCAZELO, INDLELA, NOKUNYE OKUNINZI
La jack yeekomityi Likhadi eliliqela le-Minor Arcana, ukuba ufuna ukwazi inkcazo, intsingiselo kunye nokunye okuninzi!, Ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda eli nqaku.
Iphepha leNdebe, elinye lama-78 amakhadi e-tarot
1 I-Tarot Jack yeeNdebe
1.1 Inkcazo yemizobo yePhepha leNdebe
2 Imela ntoni kwihlabathi le-tarot?
2.2 UJack weeNdebe emi nkqo
2.3 UJack weNdebe kwindawo eguqulweyo
2.4 Ukudityaniswa kweJack yeNdebe
I-Tarot Jack yeeNdebe
Elinye lamakhadi ezesuti ezine ezenza iMinor Arcana. Ngokubanzi, yileta efuzisela umntu omsulwa, onesidima, onentliziyo entle.
Nangona kunjalo, njengakuwo onke amakhadi e-tarot intsingiselo yayo iyatshintsha, inokuba yinto elungileyo okanye embi; Yonke into iya kuxhomekeka ekubeni ijack yeglasi ngexesha lokufunda iza ngqo okanye ngenye indlela ejikeleze.
Eli khadi limele iimpawu zomntu, zivelise umfanekiso womntu obonakalisa ingqondo ebanzi kunye nokuyila. Zihlala zibuthathaka, zithule kwaye ziluncedo kakhulu, ziyakonwabela ukunceda abanye nangayiphi na indlela abanokuthi ngayo.
Iphepha leNdebe libonisa isimilo somntu ozivelelayo kwaye okhutheleyo, lo mntu unenqanaba eliphezulu le-charisma, ukuqonda, amandla kwaye uyathandeka kwaye unomdla. Ungumthunywa othi kwasekuqaleni adale ukuzithemba kunye nentuthuzelo ngokuzisa iindaba zakhe ezilungileyo.
Kuyaqondwa kwakhona, njengoloyiso loqhwithela, iindaba ezimnandi ezivela kumntu onobubele ngokwenene okanye ngentliziyo elungileyo. Ke ngoko, itolikwa ngokuba ezi ndaba zilungileyo zivela enkwenkweni okanye kwintombazana.
Inkcazo yemizobo yePhepha leNdebe
Eli khadi lahlukile kwinto uninzi lwabantu olwaziyo njengolu Iphepha leekomityi ukusuka kumgangatho waseSpain, kumdlalo wekhadi.
Le Arcana incinci imelwe ngumfazi o-blonde onxibe iimpahla ezibonisa ubudala bexesha eliphakathi, eliqhelekileyo kwinkcubeko yaseMarseillaise.
Ingubo yakhe inoshicilelo lweentyatyambo, enemikhono emthubi kunye nebrukhwe, entlokweni yakhe unxibe ibharethi ebhulowu nesikhafu sombala ofanayo, ocwangciswe egxalabeni lakhe kunye nekepusi.
Lo mfazi onesimo esihle nesentekenteke ubonakala embindini wonobumba ephethe ikomityi yegolide esandleni sakhe sasekunene, ekuphakameni kwamagxa akhe ngokungathi wenza i-toast; ikomityi iqulethe intlanzi encinci ejonge kuyo kwaye emva kwayo ubona kuphela imvelaphi eluhlaza okwesibhakabhaka nolwandle.
Imela ntoni kwihlabathi le-tarot?
Ngokwe-numerology, i-kabbalistics kunye ne-astrology, oku kunentsingiselo ethile ngokweesimboli zayo, oku kuvumela umfundi we-tarot ukuba adibanise iimpendulo eziphumayo emva koonobumba.
Ngokutsho kwakhe ngeenkwenkwezi ibonisa amandla amakhulu, ngenxa yokuba uVenus udibana noSaturn, yiyo loo nto enokubonakaliswa kwezi zinto zimbini ziimpawu zezi planethi "amanzi" kunye "nomhlaba".
Inxulumene namanani 24 kunye no-72, kuba njengoko benditshilo ngaphambili, yileta echaza umntu omncinci. Nangona kunjalo, unobukrelekrele kunye nokuzimisela komntu onamava wabantu abadala.
Ngokubanzi, eli khadi linentsingiselo yesiqalo somsitho obalulekileyo kwaye kuxhomekeke kwindawo elikuyo ikhadi, lo msitho utolikwa ngokwahlukileyo.
UJack weeNdebe emi nkqo
Kutoliko lwayo le leta ibonisa kuphela imiyalezo eyakhayo, iindaba ezikhuthazayo ezinokuthi zibekho nakweyiphi na indawo ebomini bakho, nokuba kukwimisebenzi yakho, ekhaya okanye ekukhuleni kwakho. Lixesha elifanelekileyo lokuthemba iimvakalelo zakho kunye nokuqhuba kwaye ufezekise zonke iinjongo zakho.
Ukunikezelwa kwentombazana encinci ephethe isiselo esandleni sayo njengombhiyozo kubonisa ukubandakanyeka, umtshato, olunye ulwalamano, ukukhulelwa, ukuqala kwesicwangciso, ukuhlela umhla, phakathi kwezinye izinto ezilungileyo. Njengoko besenditshilo ngaphambili, sisiqalo okanye ulwamkelo lwento entsha.
Ibonisa iminyhadala ezayo eza kulungela ubomi bakho, utshintsho, unyuselo okanye ukuzalwa kweeprojekthi kunye nemibono.
Indebe yegolide esekhadini, kwindawo elungileyo, imele uluhlu olufanelekileyo ngokwengeniso yezemali kunye nokucinywa kwetyala.
Abantu abafumana le leta kufundo lwabo bahlala bengabantu abanemvakalelo, kulula ukuba babenzakalise. Ukugcina uxolo lwengqondo kubhetele ukuhambisa zonke iimvakalelo ezingqubanayo ngaphandle, ngokwenza umdlalo othile.
Kuxhomekeke kwimeko apho umcebisi azifumana ekwinqwelo yokomoya, oku kunokuthetha ukuba lo mntu uya esazi umhlaba obanzi ngokwenkolo yakhe okanye nje ukuba uyayiqinisekisa kwakhona.
UJack weNdebe kwindawo eguqulweyo
Kule meko, le leta itolikwa njengoninzi lokungazinzi ngokweemvakalelo, okuzisa okuninzi kwimeko yalo mntu kunye nobuchule obuncinci bokuqhubeka nokuzihlaziya.
Ukuguqulwa, i UJack weNdebe ngothando Ibonisa kuphela ukungabikho kokhuseleko kunye nokuzithemba xa usenza okanye ucela izinto neqabane lakho. Oku kukhokelela kwiingxabano ezininzi neqabane lakho; kuba singles ezi zimo zengqondo azikuvumeli ukuba ufumane umntu ofanelekileyo.
Imele umntu ngokoqobo ajonge phantsi, isiphithiphithi esingakuvumeli ukuba ugxile kwaye uqhubeke.
Chonga ukusetyenziswa gwenxa kwemali, ke, kuya kufuneka ufunde ukulawula okanye ukuzilungiselela ukuqala iiprojekthi ezintsha kunye nokufumana umvuzo omtsha.
Ukuvuleleka kwiimvakalelo ezingqubanayo kwaye ungazi ukuba uziphathe njani, kunokukhokelela ekonakaleni kwindlela otya ngayo nakwimpilo yengqondo.
Kwiimeko zokuncitshiswa nokuphelelwa lithemba, kufanelekile ukudibana nesikhokelo somoya, kuba kunzima ukuphuma kwezi meko ngaphandle koncedo.
Ukudityaniswa kweJack yeNdebe
Kuxhomekeke kwindibaniselwano, ibonisa enye okanye enye inkcazo, ngezantsi yimizekelo emi-2:
Umdibaniso wePhepha leNdebe kunye I-Ace yeNdebe Imele uthando oluvuthiweyo esele loyise iingxaki ezithile, ilungele ukuqhubela phambili kwinqanaba elilandelayo.
I-duo yePhepha leNdebe kunye ne-Ace yekrele liguqulelwa kuphela njengongquzulwano kwindiza ethile yobomi.
Okokugqibela, ngenisa eli khonkco lilandelayo kwaye ufumane okungakumbi malunga nelinye lamakhadi amakhulu eTarot, njengoko kunjalo, 7 Igolide.